Vaovao - Momba an'i Baolai
Momba an'i Baolai
Zhejiang Baolai Group Co., Ltd. dia orinasa tsy miankina goavana manambatra ny famokarana solomaso, ny fikarohana sy ny fampandrosoana, ny famokarana, ny varotra ary ny fanafarana entana ary fanondranana entana. Ny orinasanay dia manana orinasa telo any amin'ny faratampon'ny fianakaviana, magazay 2 ao an-tanàna afovoany, orinasam-barotra vahiny, ary sehatra fivarotana lehibe an'ny antoko fahatelo any atsimo. Miaraka amin'ny traikefa nandritra ny 19 taona tamin'ny famokarana solomaso, nanamboatra orinasa fitaratra sy zaridaina efa ho zato ho an'ny fiaraha-miasa am-pirahalahiana. Any Linhai, Taizhou, Zhejiang, orinasa mpamokatra optika lehibe indrindra ao amin'ny firenena no misy ilay orinasa. Ny fivarotana sy ny orinasam-barotra avy any ivelany dia miorina ao amin'ny ivon-toeram-pizarana entana lehibe indrindra manerantany-Yiwu, Sina. Ny mpanjifa iraisam-pirenena lehibe iarahan'ny orinasantsika dia: Coca-Cola, Unilever, Wal-Mart, Disney, Lipton, Ford, sns…. Ny orinasa dia mandray ny fanavaozana ny teknolojia ho toy ny mpitari-dalana, manampahaizana manokana ho toy ny politika ary karazana fitaovana varotra vahiny malaza ho fanampiana. Ary manana tombony amin'ny vidiny izy amin'ny fiaraha-miasa amin'ny orinasa 600 ao amin'ity orinasa ity ihany, miaraka amin'ny departemantan'ny fanadihadiana anay manokana, hanomezana mpanjifa manerantany vokatra azo antoka, mitarika ny indostria amina vokatra avo lenta sy vidiny mirary.
Ny orinasa dia nifikitra hatrany tamin'ny foto-kevitra "mifototra amin'ny olona" ary manaja ny olona tsy miankina tsirairay, ao anatin'izany ny mpanjifa, mpiasa, mpiara-miasa, mpamatsy ary vondrona sosialy. Miorina amin'ny "fahamendrehana" sy "fahatokisana" ho an'io tanjona io, dia mikatsaka ny hatsarana izahay, manatsara sy manavao hatrany, ary miasa tsy tapaka ho an'ny fahasambaran'ny mpiasa sy ny tombontsoan'ny mpanjifa sy ny mpamatsy.
Miorina amin'ny tanjon'ny fananganana marika lehibe orinasa iray, manana fahatokisana izahay hivoaka ampahibemaso ao anatin'ny 5 taona, ary hikiry amin'ny fampandrosoana maharitra sy maharitra. Mandritra izany fotoana izany, miantehitra amin'ny loharanon'olombelona matanjaka izahay, fitantanana henjana ny famokarana ary ny filozofia momba ny asa aman-draharaha, amin'ny alàlan'ny fanangonana ny zavatra niainantsika manokana sy ny fikatsahana tsy tapaka ary ny fanatsarana ny ho avy, nanolo-tena ho lasa mpitarika amin'ny indostrian'ny optika any Shina sy izao tontolo izao !